Taom-baovao : manomboka ny fety aman-danonana | NewsMada
Mahavelom-bolo ! Toy ny amin’ny taom-baovaon’ny tandrefana (ny 31 desambra hifoha 1 janoary), efa manomboka misy ny fety aman-danonana hoenti-miara-manamarika ny Taom-baovao malagasy. Tsikaritra izany amin’ity taona ity raha mitaha ny tamin’ny teo aloha. Singanina manokana àry ny « Asaramanitra, taom-baovaon’ny ambanilanitra fokonolona malagasy », karakarain’ny tarika Rary sy ny Vazimba Mpanazari.
Hotanterahina ny 7 marsa izao, izany hoe, iray andro mialohan’ny faran’ny taona, araka ny fanandroana malagasy, ity hetsika ity. Tsy ho fety hifalifaliana fotsiny no hitranga amin’io fotoana io fa fanomezan-kasina ireo haikanto sy ny kolontsaina malagasy : hira, mozika, dihy, angano, antsa tononkalo, hairaha araka endrika amam-bika, sns.
Hararaotina ny fotoana hikoloana ny fanahy. Ary tsy ho latsa-danja koa ny renty sy ny haingo, tsy afa-misaraka amin’ny olombelona amin’ny fotoana toy itony. Ireo rehetra ireo, samy ho hita etsy amin’ny Tahala Rarihasina, etsy Analakely, mandritra ny tontolo andron’ny 7 marsa.
Tsara ny mampahatsiahy fa hifarana ny 8 marsa ny taona, araka ny fanandroana malagasy, izany hoe ny 9 marsa no andro voalohany amin’ny taona vaovao. Hatreto, mbola andro fiasana, toy ny andro rehetra, io daty io.